China Waterproof na anwụ ngwa ngwa eyi sịntetik akwụkwọ factory na suppliers | Shawei
Mbipụta: elu nke ngwaahịa a dị mma ma dịkwa mma, na ederede dị mma. Ọrụ obibi akwụkwọ nke akwụkwọ sịntetik dị ezigbo mma ma dị nkọ, nke na-enweghị atụ ka nke ngwaahịa ngwaahịa nkịtị. Enwere ike iji ya maka akwụkwọ mmado, mgbasa ozi, katalọgụ na ngwaahịa ndị ọzọ nwere ogo dị elu.
Printing arụmọrụ: sịntetik akwụkwọ, ya processability dị ezigbo mma, na okwu nke-ebi akwụkwọ, ma inking, ihicha, adhesion dị ezigbo mma. Enwere ike iji ink n'ozuzu ya. Na mgbakwunye na lithography, enwere ike iji ya na enyemaka, gravure na obibi akwụkwọ.
Writingrụ ọrụ ederede dị mma: n'ihi micro pores pụrụ iche dị n'elu, ederede dị mma na ederede dị nro, nke nwere ike dochie akwụkwọ ndetu akwụkwọ, akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ maka ederede n'ozuzu.
Ike waterproof onwunwe: eyi sịntetik akwụkwọ nwere zuru ezu waterproof onwunwe, nke nwere ike izere ọrụ nke n'ozuzu akwụkwọ ngwaahịa chọrọ reprocessing nke na-echebe film; Ngwaahịa a abụghị naanị ihe na-egbochi mmiri na mmiri, kama ọ nwere elu igwe na elu akwụkwọ akwụkwọ. Enwere ike iji ya na mkpuchi akwụkwọ, akwụkwọ mputa n'èzí, mgbasa ozi, akara mmiri, akara ifuru, kaadị na ihe ndị ọzọ. Ọ mara mma, na-adịgide adịgide ma nwee ike ịchekwa ọnụ ahịa ihe nkiri.
Ngwaahịa ndị a na-egosi mmiri, na-eguzogide ọgwụ na-atụgharị ma na-agbanwe agbanwe, ọ naghị adị mfe nrụrụ, ọ dịghị mfe ịgbanwu odo na na. Maka ngwaahịa ndị ekwesịrị ịchekwa ogologo oge, dị ka akwụkwọ, akwụkwọ mmado na akwụkwọ ntụaka na katalọgụ ndị ọ dị mkpa ịgụ ugboro ugboro, dị ka katalọgụ uwe, katalọgụ ngwa ụlọ, ịtụ ahịa na ute iri nri, enwere ike iji ha ogologo oge oge ma na-echekwa ego.
Snow (enyo) ọla kọpa sịntetik (BCP / BCA)
Ojiji: map, mkpuchi akwụkwọ, katalọgụ, kalenda, kalenda ọnwa, akara, akpa aka, mbipụta mgbasa ozi, wdg.
Ọkpụrụkpụ: 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm
Kaadị sịntetik kaadị (BCC)
Jiri: ofufe, akwado osisi, nri ute, album cover, akwụkwọ cover, elekere ntụ ntụ VIP kaadị, ụmụaka izi ihe, ihe ịrịba ama, nkwakọ igbe, hangtag, paipaipai.
Ọkpụrụkpụ: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm